This entry was posted on Sunday, June 29, 2008 and is filed under ဟိုရေးဒီရေး . You can leavearesponse and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .
Filed under ဟိုရေးဒီရေး
ကိုပေါ သီချင်းကလည်း ဒီ ဇာတ်လမ်းကိုပဲ အခြေခံယူထားတာဖြစ်မယ်..။
ဒီဟာလည်း ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်ရေးထားတာပဲ....
အညာသားလေးက ခံစားပြီးဗားရှင်းတမျိုးနဲ့ရေးတော့လည်း ကောင်းတာပဲ
အလိုလိုမှ မိန်းမတွေကို ယုံပါဘူးဆို။
ညာတဲ့လူတွေ အကြောင်း ထပ်သိရပြန်ပီ။
ဒါ့ကြောင့်ပြောတာပေါ့ နောင်တော်ရ ဦးဇင်းပဲ ဝတ်ကြရအောင်ပါဆိုနေ :D
သီချင်းကြားဖူးတယ်.. နော်... သနားဖို့တော့ ကောင်းသား.. ဒါပေမယ့် မိန်းမတစ်ယောက်အတွက်နဲ့ဆိုတော့...................
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အရေးအသား ကြိုက်ပါတယ်.. =)
သနားပါတယ်ဟယ်... သူ့ခမျှ... အဲဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ဖူးပါတယ်... ဘယ်နှစ်ခေါက်ဖတ်ဖတ် ရိုးမသွားတဲ့ဝတ္တုတိုလေးပါ...
ဒါကြောင့်ပြောတာပေ့ါ အင်းး ဘာမှလည်းပြောရသေးပါဘူး အခုခေတ်တော့ ဖိုးထောင်လို လူမရှိနိုင်တော့ပါဘူးး သနားစရာ ဇတ်လမ်းလေးပဲ ဝေမျှပေးတာကျေးဇူး ကိုညာ ....။